साढे ३३ किलो सुनकाण्डका नाइके पक्राउ
काठमाडौं, भदौ ५– गत पुस तेस्रो साता त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैबाट समातिएको साढे ३३ किलो अवैध सुन तस्करी काण्डका नाइके युएईबाट पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीले युएई प्रहरीको सहयोगमा तस्करीका नाइके राजन प्रसाद पन्तलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई काठमाडौं ल्याइएको र सीआईबीको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको एसपी मीरा चौधरीले जानकारी दिइन् ...
सिनपाको बजेट १ अर्ब ३८ करोड
भैरहवा, भदौ ४ । चालु आर्थिक वर्षकोलागी सिद्धार्थनगरपालिका भैरहवाले प्रथम नगरसभा मार्फत १ अरब ३८ करोड १५ लाख १९ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ २८ करोड २४ लाख ९० हजार र पुजिंगत तर्फ १ अरब ९ करोड ९० लाख २९ हजार बराबरको रकम नगरका मेयर हरिप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ कोलागी बजेटको स्रोत ...
१२ प्रतिशत बहालकर नउठाए काठमाडौं महानगरलाई पौने २ अर्ब नोक्सानी हुने
काठमाडौं, भदौ ४ । अर्थमन्त्रालयले महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र अनुसार घरबहाल कर बापत १२ प्रतिशत कर उठाउन नपाउने हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा नोक्सानी हुने र महानगरपालिकाको बजेट लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि नै गम्भीर समस्या हुने देखिएको छ। महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यही १२ प्रतिशत करको भरमा महानगरपालिकाले यति धेरै बजेटको लक्ष्य लिएको थियो। तर, १२ प्...
नितिगत अस्पष्टताले अबैध कृयाकलाप गर्न प्रोत्साहन मिलेको: एजेण्टहरुको भनाई
भाद्र २ २०७४ .
भैरहवा, भदौ २ । भन्सारमा हुने अवैध कृयाकलाप रोक्न भन्दै भन्सार विभागको छानबिन समितिले भन्सारका कर्मचारी, एजेण्ट संघ, उद्योगी व्यवसायीबाट सुझाव संकलन गरेको छ । सुझाव संकलनमा व्यापारीहरुको प्रलोभन र भन्सार कार्यालयको खुकुलो नितीले भष्टाचार मौलाएको एजेण्टहरुले दावी गरे । भन्सारको नियम अनुसार भारततर्फबाट चोरी गरेर ल्याएको सामानपनि जाँचपाच हुने हुँद...
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको बजेट ३९ करोड ५५ लाख
पाल्पा, भदौ २ - रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले यस आवमा रु ३९ करोड ५५ लाख ४२ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पर्यटनसहितको पूर्वाधार उज्यालो रैनादेवी छहरा हाम्रो आधार’ भन्ने नारासहित रैनादेवी छहरा गापाको छ दिनसम्म चलेको प्रथम गाउँ सभाबाट पारित गरिएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले पत्रकार...
लेखा समितिले रुपन्देहीमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने
बुटवल, भदौ १ । ब्यवस्थापिका संसद सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम वुद्ध अन्तराष्टिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका बारेमा रुपन्देहीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आज बुटवलमा सार्वजनिक सुनुवाईको तयारीका क्रममा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लेखा समितिले यही भदौ महिनामा विमान स्थल र यहा निर्माणाधिन ६ लेन सडकका बारेमा सार्वजनिक सुनुर्वा गर्ने जनाएको ...
कञ्चनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
सैनामैना ,१, भदौ । कञ्चन गाँउपालिकाको प्रथम गाउँसभा वैठकमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेकोे नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिका भित्रको सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई प्रमुख महत्वका साथ लिईएका छ । गाउँपालिकाकी...
तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ
तिलोत्तमा, भदौ १। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आव २०७४–७५ का लागि रु एक अर्ब ६९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको पहिलो नगरसभा बैठकमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बुधबार एक अर्ब ६९ लाख ५५ हजार ६८९ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मंगलबार नगरसभा बैठकले नीति, मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । सोहीअनुसारको बजेट बुधबार बैठकम...
भैरहवा भन्सारको बदमाशी, एउटै प्रज्ञापनबाट दुईवटा गाडी बाहिर पठाउने गरेको तथ्य फेला
साउन २८ २०७४ .
भैरहवा,साउन २८ । भैरहवाभन्सार कार्यालयले एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट एक भन्दा बढी मालवाहक ट्रक बाहिर पठाउने गरेको कालो कर्तुतको पर्दाफाशभएको छ । देशलाई लाखौ राजस्व घाटा लगाउदै भन्सार कर्मचारीहरु आफ्नो खोल्टी भर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । भन्सार कार्यालयलाई “सियो देखाएर हात्ती छिराउने ” गरेको आरोप यस अघि पनि लाग्दै आएको थियो । ब्यापारी, भन्सार एजेण...
रुपन्देहीलगायत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पेट्रोल अभाव
लुम्बिनी, साउन २७-पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनमा आवद्ध व्यवसायीले पेट्रोल खरिद नगरेपछि रुपन्देहीलगायत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पेट्रोलको अभाव भएको छ । बिक्रेताको बिक्रीस्थलमा डिस्पेन्सिङ पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा नेपाल आयल निगमले जारी गरेको बिजकमा उल्लेख गरिएको अनुसारकै परिमाण प्राप्त हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका का...
काठमाडौं । भारतीय भन्सार विन्दूबाट नेपाली भन्सार विन्दूमा आउने सवारीहरु दशगजामा नै हराउने समस्याको समाधानको लागि वाणिज्य मन्त्रालयले नयाँ योजना ल्याएको छ । भारतबाट नेपाल जान भनेर हिँडेका कन्टेनरहरु नेपाल नआई हराउने गरेको समस्यालाई समाधान गर्ने एक मात्रै उपाय कन्टेनरमाथिको निगरानी रहेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले अब भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान बोके...
काठमाडौं । राज्यका निकायहरु नै कमजोर भयो भने जस्ता सुकै व्यवसायीहरु पनि राज्यलाई ठग्न माहिर हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त राज्यका केही अंगहरुको गतिविधिले देखाउने गरेको छ । लामो समयदेखि वाणिज्य विभागको सुस्त गतिविधिका कारण गैर नेपाली व्यवसायीहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नगरी पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने गरेको बुझिन आएको छ । नेपाल बाहिरबाट आएर न...
निमदत्त सुवेदी पोखरा, साउन २३। पढाइ सकेपछि जागिर खोज्दा कतै नपाएपछि कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका– ३१ बेगनासतालका एक युवा मौरीपालन व्यवसायमा लागेर उदाहरणीय कृषक बन्नुभएको छ । सो ठाउँका कृषक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बेगनास मौरीघार उद्योग सञ्चालन गरी मौरीपालन व्यवसायबाट वार्षिक रु १८ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले अहिले ९०...
आजको विनिमय दर ः डलर एक सय २ रुपैयाँ
काठमाडौं, साउन २३–नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर एक सय १ रुपैयाँ ४४ पैसा र विक्रिदर एक सय २ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ ।
तुलसीपुरमा घुमन्ते व्यापारीलाई प्रवेश निषेध
तुलसीपुर । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफनो कार्यक्षेत्र भित्र कुनै पनि प्रकारका घुमन्ते व्यापारीहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाईने जनाएको छ । विशेषगरी संघको क्षेत्राधिकार भित्र तुलसीपुर क्षेत्रमा घुमन्ते व्यापारीहरुले गर्दै आएको कारोवारलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको संघका अध्यक्ष विर वहादुर रावतले जानकारी दिए । अध्यक्ष रावतका अनुसार तुलसीपुर क्षेत्रमा घ...
जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको लेखासमितको ठहर, कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
काठमाडौं, साउन २०– पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले किनेको जग्गामा आर्थिक हिनामिना भएको ठहर संसदको लेखा समितिले गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति डोप्रसाद उपाध्यायले आर्थि...
काठमाडौँ साउन ,१४। धितोपत्र बजारमा यस साता रु पाँच अर्ब ५३ करोड १८ लाख ६६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जकाअनुसार कुल १७० कम्पनीको ९० लाख ५८ हजार ७० कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १६ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी हो । गत साता १६५ कम्पनीको ८७ लाख ५३ हजार आठ सय ८० कित्ता शेयर रु चार अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ७६...
एनएमबी बैंकको नाफा एक अर्ब ५१ करोड
काठमाडौं साउन, १४–एनएमबी बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ३५.५४ प्रतिशत बढी हो । ब्याज आम्दानीमा भएको प्रगतिका कारण बैंकको नाफा बढेको हो । बैंकको कुल सञ्चालन मुनाफा भने एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले गत आवमा ७३ अर्ब २२ करोड निक्षेप संकलन गरि ६१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रव...
नवलपरासी सदरमुकाम विकासका लागि ५० करोड
परासी साउन, ११–नवलपरासीको सदरमुकाम परासी बजारको विकासका लागि रामग्राम नगरपालिकाकाले विभिन्न सडक तथा भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गर्न ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । सरकारले तराईका जिल्लाहरुको सदरमुकाम विकासका लागि बिनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँले उक्त सदरमुकाम परासीको विकास गर्न लागिएको हो । रामग्राम नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम परासीमा पर्दछ । ...
सेयर बजार ६.४८ अंकले घट्यो
काठमाडौं साउन, ९–नेपालको पुँजी बजार सोमबार ६.४८ अंकले ओरालो लागेको छ । एक सय ५३ कम्पनीको १७ लाख ४० हजार ४ सय ५७ कित्ता सेयर बिनवेच भएको बजारमा एक अर्ब ६ करोड ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँको कारोवार भएको छ । बैक, होटल, बिकास बैंक, जलविद्युत समूहको सूचक ओरालो लागेको आज फाइनान्स, बीमा उत्पादनमुलक समूहका मात्र सूचक बढेको छ । आज बैकिङ समूहको स...
काठमाडौं साउन ९–नेपाली बजारमा सोमबार सुनको भाउ स्थिर छ । अघिल्लो दिन तोलामा ४ सय रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ आज भने स्थिर रहेको हो । आज पनि बजारमा सुन प्रतितोला ५४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको छ । यस्तै, चाँदी पनि आज तोलाको ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
उन्नाइस कम्पनीको १३ अर्ब बढीको हकप्रद शेयर आउँदै, आकर्षण जलविद्युतको शेयरमा
काठमाडौं साउन, ७– विभिन्न १९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बोर्डकाअनुसार ती सबै कम्पनीले तोकिएको समयमा नै हकप्रद शेयर जारी गर्न सके पूँजीबजारमा रु १३ करोड ५७ लाख ५१ हजार १०१ कित्ता शेयर प्रवेश गर्नेछ । ती शेयरको मूल्य रु १३ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख १० हजार ११८ बराबरको हुनेछ । त्यसरी हकप्रद शेयर नि...
काठमाडौँ, साउन ७ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु चार अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कूल १६५ कम्पनीको ८७ लाख ५३ हजार ८८० कित्ता शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्चेन्जले जनाएको छ । यससाता कारोबार रकम गत साताको भन्दा १२ दशमलव ७२ प्रतिशत बढी हो । गत साता १६८ कम्पनीको रु चार अर्ब २० करोड ३४ लाख ५२ हजार बराबरका एक करोड १४...
नवलपरासी महेसपुर भन्सारद्वारा ६ करोड राजस्व संकलन
परासी साउन ७–महेसपुर छोटी भन्सार कार्यालय नवलपरासीले एक वर्षमा करिब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा विभिन्न शिर्षकबाट गरि कुल ५ करोड, ८९ लाख, ६२ हजार ८ सय ७८ रुपिया राजस्व संकलन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कार्यालयबाट हुने भन्सार पैठारी दस्तुर तर्फ २ करोड, ८४ लाख...
सुनको भाउ ५४ हजार पुग्यो
काठमाडौं साउन ६–नेपाली बजारमा सुनको भाउ ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन ५३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोवार भएको सुनको भाउ आज तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो तोलामा एक सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ भने उक्लिएको हो । आज बजारमा चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ७ सय ३० रुपैयाँ...
काठमाडौं साउन ५, –नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको भाउ तोलामा एक सय रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन तोलामा एक सय रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ आज फेरी एक सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज वजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । यस्तै आज वजारमा चाँदीको भाउ तोलाको ७ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ ।
विमानस्थल भन्सारमा 'आशिकुडा वर्ड' लागू, व्यापारीको ठगीधन्दा रोकिने
काठमाडौं । भन्सार विभाग अन्तर्गत्को त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा स्वचालित भन्सार (आशिकुडा) प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । उक्त प्रणालीको बिहीबार अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले उद्घाटन गरे । यस अघि पनि ६ वटा भन्सार कार्यालयमा लागू गरिसकिएको आशिकोडा वर्ड विभिन्न मुलुकबाट सामान आउने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भने पहिल...
९ खर्बको आयात हुँदा ६८ अर्ब निर्यात, रेमिट्यान्स ६ खर्ब ३३ अर्ब आयो
काठमाडौं साउन ४–चालु आर्थिक बर्षको ११ महिना अवधीमा नेपालले करिव ९ खर्ब रुपैयाँको आयात गेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधीको तुलनामा ३०.९ प्रतिशत बढी हो । चालु आवमा ८ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । यो अवधीमा भारतवाट हुने वस्तु तथा सेवा आयात ३९ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनवाट हुने आयात १० प्रतिशत अन्य मुलुकवाट हुने आयात २३.४ प्र...
काठमाडौंमा झण्डै १२ प्रतिशतले घट्यो मूल्यबृद्धि, पहाडको बजार सबैभन्दा महंगो
काठमाडौं । तपाईँलाई लाग्छ काठमाडौंमा महंगी एकदमै न्यून भएको छ भन्नेमा ? लाग्दैन भने पनि अब विश्वास गर्नै पर्छ । किनभने केन्द्रीय बैंकले यो वर्षको पहिलो ११ महिनाको विश्लेषणको आधारमा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । उक्त प्रतिवेदनले पहिलो ११ महिनामा पहाडी भेगमा सबैभन्दा बढी महंगी बढेको देखाएको छ । उपभोक्ताहरुको हकमा मूल्यबृद्धिदर पहाडमा चार,...
कपिलवस्तुमा १ अर्ब ८ करोड बढि बजेट फ्रिज
कपिलवस्तु साउन ३– कपिलवस्तुमा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्व ८ करोड बढि रकम फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विभिन्न कार्यालयहरुले खर्च नै गर्न नसकेपछि एक अर्व भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको हो । जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा चालु खर्च तर्फको ८५ करोड ९५ लाख ९५ हजार ४ सय ३ तथा पुंजीगत ...
गुल्मीमा पुँजीगत ८८ र चालुतर्फ ९४ प्रतिशत बजेट खर्च
गुल्मी, साउन २ । गुल्मी जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा पूँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत भएको छ । जिल्लाका ६३ वटा सरकारी कार्यालयको कुल बजेट दुई अर्व ५२ करोड चार लाख ४० हजार सात सय ८१ रहेको थियो । जसमा दुई अर्ब ४४ करोड ११ लाख २१ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । गत बर्ष एक अर्व १५ करोड ९३ लाख ८३ हजार पाँच सय पुजीगत बज...
महानगरको आर्थिक ऐनले यसरी रोक्दैछ काठमाडौंमा राजश्व चुहावट
काठमाडौं । नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको राजश्व स‌ंकलन तर्फ देखिएका सानातिना समस्याहरु समेत सुल्झाउन सक्नेगरी आर्थिक ऐनमा केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरिएको छ । महानगरपालिकाको गत ३१ असारमा पारित आर्थिक ऐनमा केही यस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका छन् जसले महानगरपालिकाको राजश्व संकलनमा देखिएका केही समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने विश्वास ...
चितवन साउन,२ । चेपाङ गाउँमा घुम्ती बैंक स्थापना गरेर वृद्धभत्ता वितरण गर्ने योजना पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाले अघि सारेको छ । आगामी वर्षका लागि रु ३७ करोड ५८ लाख ५० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले चेपाङ गाउँमा घुम्ती बैंक प्रणालीबाट सहज रुपमा सो रकम उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको नगरप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ज्येष्ठ...
डेढ अर्बको जग्गा किन्दा ६७ करोड घोटाला
साउन २ २०७४ नागरिक दैनिक
काठमाडौं साउन, २ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्ती भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। निगमले करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो। निगमले सातै...
रुपन्देहीमा करिब साढे ४ अर्ब बजेट फ्रिज
भैरहवा साउन, १ । रुपन्देहीमा गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ४ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय ७३ रुपैया बजेट फ्रिज भएको छ । आइतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीले भैरहवामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लाबाट संकलित राजश्व तथा खर्च सार्वजनिक गरेको छ । जसमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको देखिएको छ । पुँजिगत तर्फ ठूलाठूला विकासे...
सेयर बजार : चार अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौँ असार ३१ - धितोपत्र बजारमा यस साता रु चार अर्ब २० करोड ३४ लाख ५२ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार कुल १६८ कम्पनीको एक करोड १४ लाख ३८ हजार ३९० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५९ दशमलव ४३ प्रतिशत बढी हो । गत साता १६२ कम्पनी रु दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ४१ हजार बराबरका ७० लाख २३ ह...
ललितपुर नगरसभा : सवा ३ अर्बको बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं असार, ३१ । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सवा ३ अर्बको वार्षिक वजेट प्रस्ताव गरेको छ । शनिबार महानगरपालिका कार्यालयमा सम्पन्न पहिलो नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब २२ करोड ९१ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि...
१६ वर्षपछि पहिलो पटक असारमै बजेट पास, साउन १ देखि नै खर्च
असार ३० २०७४ कान्तिपुर दैनिक
काठमाडौं ,असार ३०। १६ वर्षपछि आर्थिक वर्ष नलाग्दै (असारमै) बजेट पास भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को बिहीबारको बैठकले बहुमतमा दुई आश्रित विधेयक पास गरेपछि पूर्णरूपमा बजेट पास भएको हो । बिहीबारको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पास गरेको हो । तीन दिनअघि बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक पास भइसकेको थियो। गत वर्ष विनियोजन विधेयक अ...
यसबर्ष कुल खर्च ७ सय ६१ अर्ब, ४९ लाख : पुँजीगत खर्च ५४ दशमलव ३३ प्रतिशत
काठमाडौं असार २९,– अर्थमन्त्रालयको बुधबारसम्मको आंकडा अनुसार यसबर्षको बजेट खर्च अन्र्तगत पूँजीगत खर्च १ सय ६९ अर्व, ४६ करोड ९९ लाख ८९ हजार भएको छ भने ५ सय ४ अर्ब, २ करोड, ९१ लाख ५८ हजार चालु खर्च भएको छ । यस्तै वित्तिय व्यवस्थाका लागि ८७ अरब ५० करोड ५८ लाख ५२ हजार गरेर कुल ७ सय ६१ अर्ब, ४९ लाख ८९ हजार खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव...